भारतको उत्तराखण्डको आश्चर्यलाग्दो रहस्य : जहाँ १३२ गाउँमा किन छोरी नै जन्मिदैनन ? – ताजा समाचार
भारतको उत्तराखण्डको आश्चर्यलाग्दो रहस्य : जहाँ १३२ गाउँमा किन छोरी नै जन्मिदैनन ?
भारतको उत्तरकाशीमा दुर्गम पहाडी गाउँहरू छरिएर रहेका छन्
दोस्रो, उत्तरकाशीको जनसङ्ख्या एकदमै पातलो छ। एउटा गाउँको औसत जनसङ्ख्या ५०० जति हुनसक्छ र केही दुर्गम गाउँमा त १०० जना मानिसहरू मात्र बसोबास गर्ने पनि छन्। स्वास्थ्य अधिकारीहरू भन्छन् एउटा सानो गाउँमा १०-१५ वटा घर हुनसक्छन् र त्यस्तो प्रकारको गाउँहरूमा एकथरी लिङ्गका मात्रै शिशुको जन्म भएको तथ्याङ्कले खासै ठूलो अर्थ राख्दैन।
यदि थुप्रै गाउँहरूमा छोरीको जन्म नै नभएको भए उक्त जिल्लाको लैङ्गिक सन्तुलनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने थियो, चौहानले भने।
हिन्दुस्तान टाइम्स पत्रिकासँग कुरा गर्दै एकजना स्थानीय महिला रोशनी रावतले भनिन्,छोराको जन्म होस् की छोरी, हामी खाली भगवानसँग नवजात शिशु स्वस्थ र खुशी रहोस् भनेर प्रार्थना गर्छौं।
त्यस क्षेत्रमा पुरुषको दाँजोमा महिलाले बढी मेहनत गर्नुपर्छस् खेतमा काम गर्ने, घाँस काट्ने, गाई दुहुने, खानेकुरा पकाउने, घरको सबै काम गर्ने सबै महिला नै हुन्। पुरुषहरूमा मदिराको अम्मलको समस्या चर्को देखिएको छ।
आशिष चौहान भन्छन् त्यहाँ थोरै जनसङ्ख्याका कारण नाफा नहुने हुँदा ठूलो स्तरमा गैरकानुनी गर्भपतन सेवा उपलब्ध भएको देखिँदैन।तर यहाँ एउटा उदेक लाग्दो कुरा पनि देखिन्छ।
एप्रिल र जुन महिनाकोबीचमा भएको ९६१ जन्म मध्ये २०७ घरैमा सुत्केरी भएको अभिलेख छ। ती मध्ये १०९ बालक र ९३ बालिका रहेका छन्। जुन तथ्याङ्कले जिल्लाका समग्र लैङ्गिक सन्तुलन अनुपातलाई नै तरंगित पारिदिएको छ। जिल्लाका एकजना वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी चन्दनसिंह रावत भन्छन् यो बुझ्नै नसकिने तथ्याङ्क भएको छ। यस विषयमा हामीले थप अनुसन्धान गर्नुपर्छ।
अब केही समयपछि नै उत्तराखण्डका नजन्मिएका छोरीहरूका बारेमा थप जानकारी प्राप्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। श्रोत : बिबिसी